तोकिएका मापदण्ड अव्यवहारिक-राप्ती क्रसर ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष मिनबहादुर शाहि - Jagaran Online
तोकिएका मापदण्ड अव्यवहारिक-राप्ती क्रसर ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष मिनबहादुर शाहि
सरकारले क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका रहेका उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कोसिस गरेको छ । यसमा हामी नीतिसम्वत् सञ्चालनमा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई ठिकै लागेको छ ।
राज्यको नीति र विधिभन्दा माथि कोहि पनि जान सक्दैन् । सरकारले ल्याएको नीति अनुसार नै हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि चल्नुपर्छ । दाङमा १५ दिनभित्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन रहेका उद्योग बन्द गर्न सरकारले निर्देशन जारी गरिकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले पनि सरकालाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ । तर सरकारले पनि व्यवसायीका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।
क्रसर उद्योगका लागि तोकिएका मापण्ड व्यवहारिक छदैछैनन् भन्दा पनि हुन्छ । ति सबै कुराको मापदण्ड व्यवहारिक नहुँदा क्रसर उद्योग जहिले पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको भनेर खबर आउने गरेका छन् । क्रसर उद्योग अरू उद्योगजस्तो चलाउन सहज छैन् ।
सरकारी अहिलेको मापदण्ड भनेको खोलाको किनारबाट पाँच सय मिटर, वनबाट दुई किलोमिटर, विद्यालय वा कलेजबाट दुई किलोमिटर, सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर भन्ने मापदण्ड अलि व्यवहारिक भएनन् कि भन्ने लागेको छ । यि सबै मापदण्ड पालना गर्दा उद्योग कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने नै अन्यौल हुन्छ ? त्यसकारण पनि केही मापदण्डबाहेक अरू मापदण्ड अव्यहारिक छन् भन्ने लाग्छ । तर हामीले राज्यको नीति र विधिलाई मान्दैनौँ भनेका छैनौँ । हाम्रो त आग्रह, अनुरोधमात्रै हो, ति मापदण्डलाई थप परिमार्जन गराउन सकिन्छ कि ?
उत्खनन् व्यवस्थित हुनुप¥यो, उद्योगीलाई राहत, सपोर्ट गर्ने गरी मापदण्ड घट्नुपर्छ । अब अहिले बालुवा प्रशोधन उद्योग किन क्रसर उद्योगका रूपमा सञ्चालनमा आए ? भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा छ । यसले गर्दा करोडौ करोड राजस्व सरकारले गुमाउनुपरेको छ भन्ने छ । यसमा विषेशगरी कुरा के हो ? भने सरकारले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण तत्काल विकास निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने भएपछि सरकारले बालुवा उद्योगलाई सेवामूलकको उद्देश्यमा काम गर्नुप¥यो ।
नर्निर्माण गर्नुपर्ने धेरै भएका कारण पनि सरकारले क्रसर उद्योगको जस्तो मापदण्ड नतोकेर केही खुकुलो बनाएर बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भए । ति बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएपछि बालुवा उत्पादन गर्न सहज देखिएन् । किनभने धादिङ, काठमाडौं जस्तो प्रशस्त बालुवा नपाईने अवस्था भएपछि क्रसरमार्फत पनि बालुवा प्रशोधन गर्न सकिने भयो र त्यहि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म आएको हो ।
अहिले सरकारले ति क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा बालुवाको मागलाई धान्न सकिन्छ या सकिदैन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा सायद बालुवा प्रशोधन गर्न क्रसर उद्योगबिना पनि असम्भव देखिएको छ । तर अहिलेको १५ दिनभित्र हामीले तुरून्तै ति ढुंगा फोर्नका लागि स्थापना गरिएका क्रसर उद्योग निकाल्छौँ । अहिले अर्कोकुरा के पनि आउँछ ? भने क्रसर उद्योगले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेका छन् भने विभिन्न तवरले आरोप आउने गरेको छ ।
म यसलाई पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु कुरा के हो ? भने हामीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सिधै उत्खनन् गर्ने होइन्, उत्खनन् गर्ने भनेको ठेकेदार अरू नै हुन्छन् । ति ठेकेदारलाई स्थानीय सरकारले ठेक्का दिन्छ, हामीलाई कच्चापदार्थ पु¥याउनका लागि ति ठेकेदारले अलिकति बढी नै उत्खनन् हुने गरेको छ । यस्तो कुराहरूमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्, अहिले त धान काट्ने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भनेझैँ भएको छ ।